Saddex meelood meel ka mid ah dhakhaatiirta British ka ah oo u dhiganta 35.4% waxa ay ku dhasheen dalka dibaddiisa - Horn Future
Saddex meelood meel ka mid ah dhakhaatiirta British ka ah oo u dhiganta 35.4% waxa ay ku dhasheen dalka dibaddiisa
London-Wargeyska (Daily Mail)ee British ka ah ayaa sheegay in Britain ay tahay dalka ugu horeeya ee ku tiirsan dhakhtarrada ajnabiga ah ee ku dhashay dalka dibadiisa marka la barbar dhigo dhigeeda dalalka kale ee Midowga Yurub.
Daraasadan ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in in ka badan saddex meelood meel ka mid ah dhakhaatiirta British ka ah oo u dhiganta 35.4% ay ku dhasheen dalka dibaddiisa, halka Britain sido kale ay aad ugu tiirsan tahay kalkaalisooyinka shisheeyaha ah.
Waxa kale oo daraasadan lagu sheegay in tirada dhakhaatiirta ajnabiga ah ee Italy ay dhan yihiin 5%, halka Germany dhan yihiin 10.7%,iyo France oo ay dhan yihiin 19.5% tiradaas oo kor u kacday.
Daraasadan ayaa lagu ogaaday in Britain ay haatan tahay jihada labaad ee ugu soo jiidashada badan adduunka ee xaga dhakhtarada soo galootiga ah, halka America ay tahay meesha ugu horeeysa ee kaalinta 1aad ku jirta.
Horaantii bishan, daraasad kale ayaa sheegtay in bukaan ku uunan si buuxda ugu faraxsanayn daryeelka marka ay kalkaalisooyinku ay yihiin kuwo shisheeye u dhashay,waxana cilmi baadhayaalkani ay cilad ugu dhigeen arinkan qayb ka mid ah dhibaatooyinka xaga afka ama ka maqnaashiyaha wacyiga-dhaqanka.
« Germany oo shaqaalaysiinaysa 8,500 oo macallimiin cusub ah si loo baro afka Jarmalka carruurta qaxootiga ah.	» Xildhibaanada macaaradka USN oo maanta oo Arbaca ah marka le qaadacay fadhigii baarlamanka Geelle